सरकारको संरक्षणमा तरकारी बिचौलिया – www.janabato.com
सरकारको संरक्षणमा तरकारी बिचौलिया
६ भाद्र २०७५, बुधबार ०२:३७ August 22, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । देशैभर हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरुको हालीमुहाली छ । कमिसनको खेलले उपभोक्ताहरु चरम मारमा छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा हुने बिचौलियाहरुको चलखेल, उनीहरुको कमिसनको खेलले किसान र उपभोक्तालाई सताएको छ ।
खासगरीकन बिचौलियाका कै कारण किसानहरुले उत्पादनको कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताहरुले महंगोमा तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्यका कारण बिचौलियाहरुको कारणले नै हो । तर बिडम्बना ! सरकारले किसानको संरक्षण र उपभोक्ताहरुलाई सस्तोमा तरकारी उपलब्ध गराउनुको साटो बिचौचियाहरुको संरक्षण सरकारले नै गरेको कारण उपभोक्ताहरुले सबैभन्दा धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ ।
किसान र उपभोक्ताहरुले भोग्नुपरेको पीडाबारे सरकार मौन भएकै कारण उनीहरु ठगिनु परेको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागी यसबारे विभिन्न छानबिन समितिहरु बनाएर प्रतिवेदनहरु सार्बजनिक भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सरकारको मिलोमतोमा तरकारी ब्यवसायमा बिलौलियाको राज चलिरहेको छ ।
← थारु कल्याणकारिणी सभा बुटवल उपमहानगर समितिमा श्यामलाल
भारतीय झण्डाले निहुरिएको नेपाली शीर →
मई १, १८८६ को गौरवमय मजदुर संघर्ष
१८ बैशाख २०७५, मंगलवार ०५:४५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on मई १, १८८६ को गौरवमय मजदुर संघर्ष
भुमिकास्थान नगरपालिकामा जबरजस्ती करणीको आरोपमा फरार अभियुक्तद्धारा आत्महत्या
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार १०:३७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on भुमिकास्थान नगरपालिकामा जबरजस्ती करणीको आरोपमा फरार अभियुक्तद्धारा आत्महत्या
साहित्य संगम बुटवलको २७७ औं शृंखला सम्पन्न
२९ पुष २०७४, शनिबार १२:५२ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on साहित्य संगम बुटवलको २७७ औं शृंखला सम्पन्न